एक जडान पट्टी कसरी crochet सिक्न
जडान स्तम्भ (अन्यथा polustolbik वा गाई बांध्नु) - crochet आधारभूत तत्व मध्ये एक हो। यो बन्धन र edging, साथै क्षेत्रीय लागि परिपत्र बुनाई सर्कल लागि, रूपांतरण प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
साथै, जडान पट्टी यस्तो हुँदा उत्पादन भागहरु, जडान गर्न प्रयोग गरिएको छ कंबल, पर्दे, वर्ग, त्रिकोणात्मक, वा अन्य कुनै पनि मनसाय को tablecloths। दुर्लभ अवस्थामा, यो एक प्रत्यक्ष वेब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको छ। यस लेखमा हामी कसरी हुक जडान स्तम्भ प्रदर्शन गर्न साईट सुई महिलाहरु वर्णन। ठूलो स्पष्टताको लागि, हामी पनि आधार तत्व को चरण फोटो provyazyvaniya द्वारा चरण परिचय हुनेछ। हामी आशा हाम्रो लेखमा तपाईंले यो प्रविधी काम सिक्न मदत गर्नेछ।
जडान स्तम्भ: प्रतीक को व्याख्या
गाई बांध्नु crocheting मा सबै भन्दा कम उचाइ तत्व हो। लागि चिटिक्क र लगभग अदृश्य, उत्पादन विभिन्न तत्व जडान गर्न सुन्दर परिपत्र पट्टियां, फूल प्रदर्शन र ubavki loops गर्न किन अनुमति छ। क्यानभास polustolbikami धेरै बाक्लो संरचना छ र राम्रो तरिकाले यसको आकार राख्छ सिर्जना गरियो।
यो चित्र गाई बांध्नु धेरै तरिकामा संकेत छ: कालो पार, आधा-arches वा poluovalom। अर्को, हामी सजिलै र चाँडै लिङ्क गर्न जडान पट्टी कसरी हुक, र त्यसपछि कसरी "बोस्नियाली" भनिन्छ एक रोचक प्रविधी मा एक उज्ज्वल चटाई गर्न वर्णन वर्णन।
आधार सदस्य को प्रदर्शन को प्रविधि - polustolbika
vyvyazat जडान polustolbik कसरी crochet सिक्न गर्न, हामी तपाईंलाई एउटा सानो नमूना के सुझाव। कुनै पनि यार्न र हुक, उनको आकार लागि उपयुक्त तयार। अर्को टाँका7वा 8 सेमी को श्रृंखला लम्बाइ प्रदर्शन। हामी पहिलो हावा को पहिलो पाश पारित। यो पङ्क्ति उचाइ हासिल गर्न गरेको हुनुपर्छ। अब आधार को दोस्रो लुपमा हुक प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक काम मुद्दा अप रुचि र कैप रूपरेखा मार्फत यो पुल। त्यसपछि लुपमा मार्फत उनको, तान्नुभयो हुक मा स्थित। बधाई छ! अब तपाईं एक हुक जडान स्तम्भ कसरी गर्न थाहा छ। दोस्रो polustolbika हुक तेस्रो VI काम लिनु मुद्दा प्रविष्ट गर्नुहोस् र हुक मा उपलब्ध छ कि लुपमा मार्फत झिकेर प्रदर्शन गर्न। पङ्क्ति को काम अन्त गर्न analogy द्वारा। हामी हाम्रो नमूना उल्टिनु। एक हावा पाश प्रदर्शन। अर्को provyazyvaem दोस्रो पङ्क्ति फेरि स्तम्भहरू जडान। हामी अन्धो लूपहरूको दुई पङ्क्ति को क्यानभास प्राप्त। त्यसै गरी, छैन आवश्यक रोटरी उठाने लूपहरूको बनाउन प्रत्येक अन्त भूल, केही पङ्क्तिहरू बुनना। फोटो crochet जस्तो देखिन्छ त्यो हो।
बोस्नियाली crochet। जडान स्तम्भ - एक रोचक ढाँचा आधार
बोस्निया र अन्य इस्लामिक देशहरूमा crochet को धेरै लोकप्रिय विशेष प्रकारको छ - लुपमा को आधार को पछिल्लो पर्खाल polustolbikami। उहाँले बोस्नियाली भनिन्छ। यो प्रविधी बनेको उत्पादन पर्याप्त, लचिलो टिकाउ र बलियो प्राप्त छन्। अक्सर, को बोस्नियाली बुनाई को मद्दतले बेल्ट, पन्जा, berets, मोजा, गलैँचाहरु र धेरै अन्य उत्पादनहरु प्रदर्शन।
साथै, पातलो रंग कपास मुद्दा "हिमपात", "लिली" र "आइरिस" पारंपरिक जडान स्तम्भहरू सजावटी चुल्ठो द्वारा सिर्जना needlewoman र सामान दिनु र वस्त्र सजाउनु यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। गरेको महसुस नमुना crochet छ कसरी हेरौं। पछिल्लो वा अगाडि - बोस्नियाली बुनाई मा जडान स्तम्भ एक पर्खाल लागि सधैं provyazyvaetsya। एक श्रृंखला को शुरुवात मा EP उठाने एकै समयमा प्रदर्शन छैन। बरु, पङ्क्ति पहिलो स्तम्भ हुक आफ्नो दुवै पर्खालहरु लागि, पहिलो लुपमा बुना छ। फिर्ता वा अगाडि - एउटा महत्त्वपूर्ण caveat Bosniak कार्यान्वयन ढाँचा अनुहार र backstitches पङ्क्तिहरू मा काम सधैं लुपमा को एक पर्खाल हुनुपर्छ भन्ने छ। तिनीहरूले वैकल्पिक भने - एक रबर ब्याण्ड जस्तै, क्यानभास गर्दछ। अलग अलग रंग र yarns, र लूपहरूको विभिन्न संयोजन र पर्खालहरु को पङ्क्ति (एक फिर्ता र अगाडि) को प्रयोग मार्फत extraordinarily सुन्दर बान्की प्राप्त छन्।
हामीलाई fringe एक सुन्दर कम्बल बनाउन गरौं
हामी उत्पादन बढी बाक्लो यार्न निर्माण वा आधा गुना सूत्र चयन गर्न तपाईं सल्लाह। टाँका एक श्रृंखला संग काम सुरु, जो को लम्बाइ चटाई भविष्य (उदाहरण, 50 सेमी) को इच्छित चौडाइ बराबर हुनुपर्छ। पूरा श्रृंखला, सुरक्षित र काम मुद्दा काटन। अब एउटा सानो पुच्छर (7 सेमी) छोडेर हुक मा प्रारम्भिक पाश गर्छन्। तपाईं पहिले नै जडान पट्टी हुक कसरी बनाउने थाहा छ। पहिलो आधार पाश गर्न काम उपकरण प्रविष्ट गर्नुहोस्, थ्रेड लो र "मृत" पाश पालना गर्नुहोस्। यस श्रृंखला को अन्त सम्म polustolbiki जारी। हुक लुपमा को पछिल्लो पर्खाल लागि शुरू पर्छ भनेर सम्झना। श्रृंखला अन्त्य, एउटा सानो खण्ड (7 सेमी) छोडेर को काम यार्न कटौती, र त्यसपछि अन्तिम पाश, थ्रेड मार्फत उनको तान्ने कस्नु। त्यसपछि, शुरुवात र श्रृंखला को अन्त मा यी पुच्छर उत्पादन को पक्ष मा एक fringe हुनेछ। सिक्ने पछि कसरी बुनना गर्न स्तम्भ हुक जडान, यो एक रोचक धारीदार कम्बल सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुहोस्। को बोस्नियाली प्रविधी गाई बांध्नु मा - उहाँले धेरै सजिलो छ। तपाईं दुई contrasting रंग (जस्तै गुलाबी र बैजनी वा रातो र सेतो रूपमा) र संख्या4हुक मा एक्रिलिक यार्न को 250g आवश्यक हुनेछ काम गर्न।
हामी चटाई polustolbikami बुनना जारी
दोस्रो पङ्क्ति फेरि हुक प्रारम्भिक पाश देखि सुरु र यो पहिलो polustolbikami जस्तै दिशा मा अगाडि पक्षमा बुनना।
रंग सूत्रहरू हरेक दुई पङ्क्ति परिवर्तन। गर्न ब्लेड दाँया पट्टि mowed छैन, हरेक चौथो पङ्क्ति दोस्रो पाश संग बुनाई शुरू, र अन्त मा, एक-पाश थप, जसबाट अलिकति पनि बुनाई बदलता बाँकी। तपाईंको प्याड सम्ममा बुनना इच्छित लम्बाइ पुगेको छ। को fringe को अन्त मा र त्यसपछि कैंची align। यो उज्यालो र नरम उत्पादन आफ्नो बाथरूम वा बेडरूम लागि सजावट को एक महान तत्व हो।
चित्र spokes, बुनाई स्वेटर को पुरुष को फोटो र विवरण संग Aran ढाँचाहरू
घर शिल्प: आफ्नो हातमा एक टी-शर्ट सजाउनु कसरी
पुतलीहरु हात - राम्रो र सजिलो!
उच्च आवृत्ति प्रेरणा ताप। प्रेरणा ताप तापक्रम
पेरिस मा पिकासो संग्रहालय, आधुनिक पल्ट आफ्नो मूल देखि
"एक रूखमुनि" Metallosayding: सुविधा र प्रकार
पातलो वजन प्रविधी। समीक्षा र सिफारिसहरू
Florenskaya क्रस-सिलाई: घटना इतिहास
प्रोस्टेट गोप्य मा अनाज लेसितिण: आदर्श र विचलन